ငွေစန္ဒာသည် ၂၀၁၁ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၁၄ရက်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်စထက်တစ်စကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာသဖြင့် ဘလော့မရေးနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးတွင်သူမချစ်သောမိသားစုကိုသံယောဇဉ်ဖြတ်လျက်ရေးဖော်ရေးဖက်
မိတ်ဆွေဘလော့ဂါအပေါင်းတို့ကိုထားရစ်ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ခုနှစ် ၊ ဇူလှိုင်လ ၄ ရက်နံနက်တွင် ဘဝတစ်ပါး သို့ကူးပြောင်း သွားပါကြောင်းဝမ်းနည်းစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by ငွေစန္ဒာ at 11:23 PM
khin July 11, 2011 at 11:52 PM
လူချင်းမရင်းနှီးပေမဲ. ဘလောဂ်တွေဖတ်နေလို.ရင်းနှီးနေတဲ. ညီမလေး ကောင်းရာဘုံဘ၀သုဂတိလားပါစေလို.ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင်.ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 12, 2011 at 12:44 AM
မငွေစန္ဒာ ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဘလောဂ့်ရေးဖော်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင်မက
ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင့် ထပ်တူပါ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါသည်။
မငွေစန္ဒာ ကောင်းရာသုကတိလားပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါသည်။
ညီမ ငွေစန္ဒာ ကွယ်လွန်သွားခြင်း အတွက် မိသားစု နှင့် အတူ အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲမိပါသည်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! July 12, 2011 at 1:37 AM
ညီမလေးဆုတောင်းရင်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနှင့် ထပ်တူ
Iora July 12, 2011 at 3:44 AM
အသိပေးအပ်ပါသည်ဆိုတော့ကျမလေ မမငွေစန္ဒာ စာတွေပြန်ရေးပြီလို့ အသိပေးတယ်ထင်ပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဒီဘလော့လေးကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့စာသားတွေဖတ်လိုက်ရတော့ ကျမအလွန်ဝမ်းနဲမိပါတယ်။ ကျမ အမြဲတွေးနေတာ..အုန်းထမင်းနဲ့ ကြက်သားတင်ပြီးကတည်းကပျောက်ချက်သားကောင်းနေတယ်လို့ ။ မအားတာလို့ ဘဲထင်နေမိပြီးမျှော်နေခဲ့တယ်။ ဖြူသည်မဲသည်ကြီးသည်ငယ်သည်တောင်မသိဘဲ ခင်မင်နေမိတာ ခုလိုခွဲခွါသွားတော့ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူခံစားရပါတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မမငွေစန္ဒာ ရဲ့ မိသားစုလည်း သောကတွေကင်းပြီး ကျန်းကျန်းမာမာရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။
Baby taster July 12, 2011 at 5:21 AM
ကျန်းမာရေးချူချာတယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ဒီလောက်ထိ
ဖြစ်နိုင်ရင် အမကိုမမြင်ဖူးလို့ ဓါတ်ပုံလေးတင်ပေးပါလား
မိုးငွေ့...... July 12, 2011 at 6:04 AM
SHWE ZIN U July 12, 2011 at 8:41 AM
ညီမ ငွေစန္ဒာ ခွဲခွာသွားခြင်းအတွက် မိသားစု နဲ့ အတူ ဘလောဂ့်ဂါ မောင်နှမ များနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ မိပါတယ်ဗျာ
ThuHninSee July 12, 2011 at 12:45 PM
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ..ခွဲသွားတာ မြန်လွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။
Thet Nandar Family July 12, 2011 at 7:48 PM
မငွေစန္ဒာ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
mstint July 12, 2011 at 9:35 PM
အန်တီက ဘလော့ဂ်ဂါဘဝကို မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရောက်လာတာမို့ မငွေစန္ဒာနဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မဆုံခဲ့ဖူးသော်လည်း မငွေစန္ဒာရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ခဲ့တာမို့ ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ဦးအဖြစ် ရင်းနှီးပြီးသားပါ။
အခုလို မိသားစု ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားလေသူ မငွေစန္ဒာတစ်ယောက် ဖြစ်တည်ရာဘဝတိုင်းဟာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းစွာဖြင့် သံရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်ကင်း၍ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်မည့် တရားထူး တရားမြတ်များကို ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါစေသား။
soe than July 12, 2011 at 10:20 PM
An Asian Tour Operator July 13, 2011 at 8:47 AM
rose July 13, 2011 at 10:46 AM
အို... စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ အသိပေးအပ်ပါသည် ဆိုတော့ အစ်မ မအားလပ်လို့ စာမရေးနိုင်တာကို အကြောင်းကြားတယ် ထင်ပြီး လာဖတ်တာ။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ သတင်း အတွက် ကြေကွဲ တုန်လှုပ်မိတယ်။ မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ အစ်မငွေစန္ဒာ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
Shinlay July 13, 2011 at 11:06 AM
မတွေ့ ဖူးပေမဲ့ ဘလော့ရေးရင်း မိတ်ဆွေရင်းတွေလိုခင်မင်ရတဲ့သူတယောက်
julynine July 13, 2011 at 11:09 AM
အိမ့်ချမ်းမြေ့ July 13, 2011 at 6:44 PM
ကောင်းမွန်ဝင်း July 13, 2011 at 11:00 PM
ငွေလမင်း July 13, 2011 at 11:37 PM
မအားလို့ ဒီနေ့မှ သိရတယ် တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး ဘလော့လေးကို ဟင်းဘာချက်ရမလဲ မသိရင် လာလာဖတ်တယ် ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ခဏခဏလာကြည့်ဖြစ်တယ် ဒီသတင်းကိုတော့ ဒီနေ့မှ ဖတ်ရတယ် တကယ်ပါ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းပါတယ်
ပြည်ကောင်းအောင် July 14, 2011 at 2:07 AM
ဒီသတင်းကြားရလို့ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ကြေကွဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ သူမ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေဗျာ..း((
လသာည July 14, 2011 at 3:17 AM
မလတ် July 14, 2011 at 6:48 AM
မိသားစုအတွက် ကိုယ်ချင်းစာနာမိပါတယ်။ မငွေစန္ဒာ ဘဝသစ်မှာ တရားထူးတရားမြတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
Rest In Peace"SILVER MOON" :(
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး July 14, 2011 at 9:52 PM
မအားတာနဲ့ဘလော့မလည်ဖြစ်တာ။ မမငွေစန္ဒာအကြောင်းအခုမှသိရတယ်။ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းရပါတယ်ရှင်။ မမငွေစန္ဒာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ......
khin oo may July 17, 2011 at 3:41 AM
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပါ. ကောင်းရာမွန်ရာရောက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိတယ်။ရောက်လေရာဘဝမှ အေးချမ်းသက်ရှည် အနာကင်း ပါစေ။
စန္ဒကူး July 17, 2011 at 8:34 PM
ဖြစ်ရလေ.. မရယ်... ဒီနေ့မှ ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်ဖို့အခွင့်သာတာကြောင့် ဒီအကြောင်းမသိလိုက်ဘူး။။။
စိတ်ထဲတစ်ကယ်ဝမ်းနည်းရပါတယ်... မငွေစန္ဒာနာမည် ကူးကူးနှလုံးသားထဲ အမြဲ ခြေရာထင်နေမှာပါမရယ်..
Yuya Mon July 18, 2011 at 1:12 AM
Ma Ngwe Sanda,
အပြုံးပန်း July 18, 2011 at 8:18 AM
zp August 6, 2011 at 2:42 PM
ဝမ်းနည်းပါတယ်။မြန်မာ ဘလောက်ကာ တစ်ယောက်ဆုံးရှုံး ပြန်ပြီ..ကောင်းရာဘုံမှာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ